Okwamanje, ngokhuni Cottages izwe ayabaluleka ifomu kuthandwa ingcebo. Esinye sezizathu, isimo isifiso lezakhamuzi bahlala efulethini ukhululekile okusezingeni eliphezulu ukusebenza kwemvelo.
Izinzuzo izindlu kusuka imishayo ethe njo
inketho Bafuna - emzini laminated yokwakha yaseGrisi izingodo. Izinzuzo impahla kufanele ibe indawo yokuqala, zihlanganisa yokuthi wenziwa kuphela efektri ngamathuluzi ephumelelayo yesimanje. Ngenxa yalokho, kungenzeka ukuthola yokuntwela nesimo esifanayo kanye nosayizi. Ngaphezu kwalokho, imihlobiso laminated amapulangwe akuyona ngaphansi ukusonteka izinqubo. Uthole le ndlela, sibonga omiswe lesifanele of izinto zokusetshenziswa kanye ubuchwepheshe bamuva kanye namasu. Ngakho, isakhiwo akusho deform ngisho at izinguquko abukhali kwezimiso ozungeze umhlaba wethu. ukunakekela okukhethekile enikeziwe izinzuzo kunciphisa ukwakhiwa. Iqiniso ukuthi izindlu ezakhiwe ngokhuni izingodo, empeleni yayo - kuba Cottages usulungile, zezikhali kuphela. Konke kuyadingeka ukuze kwakhiwe zabo - ukuqoqa izinto, usebenzisa imishini edingekayo kanye namathuluzi.
Izinhlobonhlobo eziningi ongakhetha kuzo emizini laminated yokwakha yaseGrisi amapulangwe
Namuhla, ngokhuni Cottages izwe ukumela anhlobonhlobo izixazululo yezakhiwo ukuthi onganelisa abathengi olindele kunazo futhi ubonise ukuqonda. Konke kuncike izicelo izakhamuzi abafuna ukuthola efulethini ukhululekile, esisogwini ethangeni bemvelo. Material kahle esilaphekayo, ngakho-ke kuba nokwenzeka ukusungula amaphrojekthi kwezindlu kusukela imishayo ethe njo, okusikhumbuza izinqaba Fairytale, primordially eqhugwaneni Russian noma isithabathaba somuzi e izibuya ultra-yanamuhla futhi eziningana nge elisophahleni ezengeziwe. Kulezi zakhiwo sokuxazulula ingxenye masimu enhle, izingadi ebusika, omangalisayo ezitebhisini yangaphakathi okuholela kwakugqamuka, njll
Ukuvikelwa Izinkuni ngokumelene ezintweni ezingezinhle
Ngo yesimanje efulethini impahla lokhuni is camera nge izidakamizwa akhethekile compounds ukuthi ukuvikela ngempumelelo ekhaya kusuka emiphumeleni elimazayo izinambuzane namagundane. Glulam, impregnation ngempumelelo iphathwa olumelana isenzo kwezulu yangaphandle (imvula, iqhwa, isichotho), akusho ziwohloka ngokuhamba kwesikhathi lapho zihlatshwa emisebe yama-UV, njll Futhi inkinga izilungiselelo okusezingeni eliphezulu umlilo. Bona negated ngokusebenzisa ekhethekile ukumelana nomlilo ugodo izitimela.
Kuka amboze nophahla lwendlu benethezekile futhi kahle?
Olungaphambili lwesonto - ekuguquleni ukubonakala izakhiwo